पर्याप्त मात्रामा कसरी सुत्ने | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काचिन किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज किलुबा कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा गा ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सिंहला सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सोट्सेल स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
तपाईँलाई आफू गणितमा कमजोर छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो लाग्न सक्छ। खेलकुदमा राम्रो गरिरहन सक्नुभएको छैन भने अझ धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा यी दुवै अवस्थामा तपाईँलाई चाहिएको कुरा भनेको निद्रा हुन सक्छ। किन? विचार गरौँ।
पर्याप्त मात्रामा सुत्नु किन आवश्‍यक छ?
तपाईँ समयमै सुत्न नसक्नुको कारण के हो?
तपाईँ कसरी पर्याप्त मात्रामा सुत्न सक्नुहुन्छ?
विशेषज्ञहरूअनुसार किशोरकिशोरी आठदेखि दस घण्टा सुत्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा सुत्नु किन आवश्‍यक छ?
पर्याप्त मात्रामा सुत्दा दिमागलाई चुस्त राख्न सकिन्छ। निद्रालाई “दिमागको आहार” पनि भनिन्छ। यसले तपाईँलाई पढाइमा ध्यान दिन, खेलकुदमा राम्रो गर्न अनि समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्न मदत गर्छ।
पर्याप्त मात्रामा सुत्दा तपाईँको मुड राम्रो हुन्छ। पर्याप्त मात्रामा सुत्न नपाएका मानिसहरूको मुड परिवर्तन भइरहन्छ अनि तिनीहरू प्रायः निराश महसुस गर्छन्‌। तिनीहरूलाई अरूसित मिलेर काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।
पर्याप्त मात्रामा सुत्दा सुरक्षित तरिकामा सवारीसाधन चलाउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणअनुसार ४० देखि ५९ वर्षका चालकहरूको तुलनामा १६ देखि २४ वर्षका चालकहरू “झुलेको कारणले गर्दा दुर्घटनामा परेका घटनाहरू लगभग दुई गुणा बढी थियो।”
पर्याप्त मात्रामा सुत्दा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। पर्याप्त मात्रामा सुत्दा हाम्रो शरीरको कोष, तन्तु र रक्‍तनलीहरू सुचारु तवरमा चल्छ। राम्ररी सुत्दा मोटोपन, मधुमेह र मस्तिष्कघातजस्ता खतरालाई पनि कम गर्न सकिन्छ।
मोबाइल फोनले काम गरिरहने हो भने त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ, त्यसैगरि तपाईँले राम्रोसँग सोच्न र काम गर्न तपाईँ पर्याप्त मात्रामा सुत्नुपर्छ
पर्याप्त मात्रामा सुत्दा धेरै फाइदा हुने भए पनि थुप्रै किशोरकिशोरी पर्याप्त मात्रामा सुतिरहेका छैनन्‌। उदाहरणको लागि, १६ वर्षकी इलेन भन्छिन्‌:
“मिसले कक्षामा सबैलाई कति बजे सुत्छौ भनेर सोध्नुहुँदा धेरैले २:०० बजे भने। कसैले त झनै ५:०० बजे भने। एक जनाले मात्र ९:३० बजे भन्यो।”
के-कस्ता कुराले तपाईँलाई समयमै सुत्नदेखि अल्झाउन सक्छ?
सामाजिक जीवन। “विशेषगरि साथीहरूसित राती घुम्न गएको बेला समय बितेको चालै पाउँदिनँ र सुत्न ढिलो भइहाल्छ।”—पामेला।
जिम्मेवारीहरू। “मलाई सुत्न मन पर्छ तर एकदमै व्यस्त भएकोले पर्याप्त मात्रामा सुत्न पाउँदिनँ।”—आना।
प्रविधि। “प्रशस्त सुत्न नसक्नुको एउटा ठूलो कारण मेरो मोबाइल फोन हो। ओछ्यानमा हुँदा फोनलाई नहेरी बस्नै सक्दिनँ।”—अनिसा।
निद्राप्रतिको तपाईँको सोचाइ केलाउनुहोस्‌। बाइबल यसो भन्छ: “मरुन्जेल मेहनत गरेर बतासलाई खेद्‌नुभन्दा बरु केही बेर आराम गर्नु नै बेस हो।” (उपदेशक ४:६) रमाइलोको लागि मात्र सुत्ने होइन, यो त आवश्‍यकता नै हो। राम्ररी सुतेनौँ भने राम्रोसित काम गर्न सक्दैनौँ अनि केही कुरा पनि रमाइलो लाग्दैन।
पर्याप्त मात्रामा सुत्नदेखि बाधा पुऱ्‍याउने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्‌। उदाहरणको लागि, के तपाईँ साथीहरूसित बाहिर निकै ढिलासम्म समय बिताउनुहुन्छ? के तपाईँ होमवर्क वा अन्य कामहरूको बोझले दबिएको महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईँ राती अबेरसम्म मोबाइल फोनमै भुलिरहनुहुन्छ वा निदाइसकेपछि पनि यसको कारण ब्युँझनुहुन्छ?
विचार गर्नुहोस्‌: तपाईँको सबैभन्दा ठूलो बाधालाई जित्न सजिलो नहुन सक्छ तर प्रयास गर्नुभयो भने त्यो बेकारमा जानेछैन। “मेहनती मानिसले बनाएको योजना सफल हुन्छ” भनी हितोपदेश २१:५ भन्छ।
हुनत हो, एक जनालाई काम लाग्ने सुझाव अर्कोलाई काम नलाग्न सक्छ। उदाहरणको लागि, कसैले दिउँसो एकछिन झप्की लियो भने राती मीठो निद्रा लाग्छ भन्छन्‌। तर कोही-कोही भने त्यसको ठीक उल्टो भन्छन्‌। त्यसैले तपाईँको लागि सबैभन्दा ठीक के हुन्छ भनी आफैले पत्ता लगाउनुहोस्‌। यी सुझावहरू तपाईँको लागि मदतकारी हुन सक्छन्‌:
सुत्नुअघि आराम गर्न समय निकाल्नुहोस्‌। दौडधूप गर्दै ओछ्यानमा नगई ओछ्यानमा जानुअघि आराम गर्नुभयो भने छिटो निदाउन सक्नुहुन्छ।
“आफ्नो काम चाँडै सिध्याउनुभयो भने सुत्नेबेला तपाईँलाई कामको चिन्ताले पिरोल्नेछैन।”—मारिया।
परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस्‌। परिस्थितिले तपाईँलाई नियन्त्रणमा राख्न नदिनुहोस्‌, बरु पर्याप्त मात्रामा सुत्नको लागि आफ्नो तालिकामा छाँटकाँट गर्नुहोस्‌।
“म हरेक रात कम्तीमा आठ घण्टा सुत्छु। त्यसैले कहिलेकाहीँ छिटो उठ्‌नुपर्ने भयो भने आज कति बजे सुत्नुपर्छ भनेर हिसाब गर्छु।”—भिन्सेन्ट।
एउटै तालिकामा चल्न प्रयत्न गर्नुहोस्‌। तालिम दिनुभयो भने तपाईँको शरीरको आन्तरिक घडीले राम्ररी काम गर्नेछ। विशेषज्ञहरू हरेक दिन एउटै समयमा सुत्न र उठ्‌न सल्लाह दिन्छन्‌। एक महिनाको लागि यो सल्लाहअनुसार गरेर हेर्नुहोस्‌, नतिजा देखेर तपाईँ छक्कै पर्नुहुनेछ।
“हरेक रात एउटै समयमा सुत्नुभयो भने बिहान उठ्‌दा स्फूर्ति पाएको महसुस गर्नुहुनेछ। यसले तपाईँलाई जुनसुकै काम अझ राम्रोसँग गर्न मदत दिनेछ।—जारेड।
सामाजिक क्रियाकलापमा सन्तुलित हुनुहोस्‌। बाइबलले “सन्तुलित आनीबानी” हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छ र यसमा फुर्सतको समयमा हामी के गर्छौँ, त्यो पनि समावेश छ।—१ तिमोथि ३:२, ११.
“साँझको समयमा सामाजिक क्रियाकलापमा कम भाग लिन मैले प्रयास गर्नुपऱ्‍यो। मनोरञ्जन गर्ने समयको सीमा नतोक्दा त्यसले साधारणतया मेरो निद्रालाई असर गर्छ!”—रेबेका।
तपाईँको फोनलाई पनि “सुत्न” दिनुहोस्‌! सुत्नुभन्दा कम्तीमा पनि एक घण्टाअघिबाट इन्टरनेट चलाउने वा साथीहरूलाई मेसेज पठाउने इच्छालाई काबूमा राख्नुहोस्‌। वास्तवमा कुनै-कुनै विशेषज्ञहरू फोन, टिभी वा ट्याबलेटबाट निस्कने प्रकाशले निदाउन गाह्रो बनाउँछ भनेर चेतावनी दिन्छन्‌।
“तपाईँ सातै दिन चौबीसै घण्टा उपलब्ध भएको मानिसहरू आशा गर्छन्‌। तर राम्ररी आराम गर्न फोनलाई पन्छ्याउनै पर्छ।”—जुलिसा।
“तालिका बनाउनुहोस्‌ अनि त्यसैअनुसार चल्नुहोस्‌। नियमित रूपमा एउटै समयमा सुत्नुभयो भने तपाईँको शरीरलाई त्यही समयमा सुत्न बानी पर्नेछ।”—बेली।
“हरेक रात समयमै ओछ्यानमा जाने बानी विकास गर्नुहोस्‌। सुत्दा हाम्रो शरीरले ताजगी पाइरहेको हुन्छ अनि तपाईँले अर्को दिनको लागि सचेत र तयार रहन मदत पाउनुहुन्छ।”—केटी।
“जमघटबाट सबैभन्दा पहिला निस्कन गाह्रो त हुन्छ तर भोलिपल्ट छिटै उठ्‌नुपर्छ भनेर तपाईँलाई थाह छ। तर त्यसरी सीमा तोक्नु भनेको परिपक्वताको चिन्ह हो।”—लोरेन्जो।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने पर्याप्त मात्रामा सुत्न के गर्न सक्छु?